“Messi miyaa sidaan u qurux badan!?” – Peter Crouch oo kashifay sheeko uu Rio Ferdinand ka baahiyay hab-dhaqankii CR7 xilligii uu ku sugnaa Man United – Gool FM
“Messi miyaa sidaan u qurux badan!?” – Peter Crouch oo kashifay sheeko uu Rio Ferdinand ka baahiyay hab-dhaqankii CR7 xilligii uu ku sugnaa Man United
(Yurub) 31 Luulyo 2021. Doodda ah midka fiican Cristiano Ronaldo ama Lionel Messi ayaa ah mid soo jirtay dhowr iyo tobankii sano ee lasoo dhaafay, waxaana xitaa aragti ku yeeshay isla labada xiddig.
Balse Peter Crouch ayaa baahiyay arrin kale oo ku qotonta in Ronaldo uu xitaa sheegin jiray inuu Messi kaga wanaagsan yahay wax ka baxsan xirfadda kubadda cagta.
Weeraryahankii hore ee Liverpool iyo xulka qaranka England ayaa daaha ka rogay sheeko uu sheegay in Rio Ferdinand uu marwalba kaga sheekeyn jiray oo ku saabsan habka uu laacibka Juventus isku bixin jiray marka ay imaaddo doodda kala wanaagsanaanta isaga iyo kabtanka xulka qaranka Argentina.
“Rio Ferdinand ayaa nooga sheekeyn jiray sida uu Cristiano Ronaldo u hor istaagi jiray muraayadda qolka lebiska isagoo qaawan timahiisana faraha gelinaya, waxaana uu noo sheegay inuu dhihi jiray ‘Wow! Aad ayaan u qurux badanahay'” ayuu yiri Crouch oo ka sheekeynayay wixii uu Ferdinand u sheegay.
“Ciyaartoyda kale ee Manchester United ayaa si ku xumeyn ah u dhihi jiray ‘waxay noqotaba, Messi ayaa kaa wanaagsan’ kaddibna inta uu garbaha kor u riixo isla markaasna uu dhoola caddeeyo ayuu ku jawaabi jiray ‘Aah haa, balse Messi sidaan uma eka'”.
Si kastaba ha ahaatee, Messi iyo Ronaldo ayaa lagu tiriyaa inay ka mid yihiin halyeeyada kubadda cagta ka gaaray maqaamka ugu sarreeya, halka dadka qaar ayaa aaminsan yihiin inay yihiin labadii ugu wanaagsanaa ee halmar ku xafiiltama darajada ugu sarreysa ee kubadda cagta muddo ka badan 15 sano.
RASMI: Trent Alexander-Arnold oo heshiis cusub u saxiixay Liverpool